अमेरिकाबाट ९ हजार नेपालीलाई फिर्ता पठाउने तयारी - विवेचना
April 25, 2018 1,198 Views
वासिंटन, वैशाख १२ । अमेरिका पुगेका ९ हजार नेपालीलाई त्यहाँको प्रशासनले नेपाल फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ ।
उनीहरुलाई अस्थायी रुपमा बस्न दिइएको अनुमति रद्द गरी स्वदेश फर्काउने तयारी भइरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । अमेरिकाले नेपाल लगायत केही मुलुकका नागरिकका लागि अस्थायी आवासीय सुविधा दिदैं आएको थियो ।
हालै अमेरिकाले साल्भाडोरका २ लाख, हाइटीका ५० हजार र निकारागुवा तथा सुडानका सानो संख्यामा आप्रवासीहरुलाई अस्थायी आवासीय अनुमति रद्द गरेको थियो । ट्रम्प प्रशासनका अनुसार आप्रवासीहरुलाई दिर्घकालसम्म अमेरिकामा बस्ने सुविधाका लागि त्यस्तो अनुमति दिइएको थिएन । त्यसैले आवश्यकता अनुसार सरकारले उक्त नीतिमा पुनरावलोकन गरेको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
Previous मोरङमा ढुंगा-गिट्टीको अवैध उत्खनन बढ्यो
Next आफ्ना नानीहरुलाई मोबाइल प्रयोग गर्न दिइरहनु भएको छ ? सावधान !
Pingback: what causes puppy hiccups
Pingback: znamenatelnye sobytiya 21 aprelya
Pingback: youtube music mp3
Pingback: 16 ijunja prazdnik
Pingback: beauty tips simple
Pingback: ljubovnaja sovmestimost po date rozhdenija
Pingback: Used Miscellaneous Testers by Haefely Test Systems at Used-Line
Pingback: blinded by the light text
Pingback: shaped ash handle travis tool
Pingback: 13 ноября праздник
Pingback: Dino Buzzati - Il segreto del bosco vecchio